Fampitaovana DJ DJ, Portable DJ Booth, VAV LED DJ Booth Display, Fampisehoana Fampisehoana Diamond
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana Fampandrosoana an'i DJ, Booth DJ Boable, VAV LED DJ Booth Display, Fampirantiana «Diamond DJ Diamond»,,
Home > Products > Ny efijery fampisehoana fahaiza-mitarika > Fampisehoana Fampandrosoana an&#39;i DJ
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana Fampandrosoana an'i DJ , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana Fampandrosoana an'i DJ , Booth DJ Boable mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny VAV LED DJ Booth Display R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Amin'ny fototry ny efijery fampisehoana LED tany am-boalohany, Hexagon LED DJ Console Display dia karazana efijery fisehoana efa namboarina, izay mety ho namboarina aravola miaraka amin'ny endriny, fanapahana sy habe. Fampisehoana Làlan'ny Fahazavana Fampidinana Fampampampampampampampampitanjanny takelaka...
VAV LED DJ Booth Display- "Live avy amin'ny tenanao"! Teknika tsara: miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia encapsulation sy ny kapoakan'ny LED, ny pikselikan'ny Led Dj Console Display Mitombo kely sy kely ny antoko HD Music , izay manome antoka tsara ny haingam-pandeha sy zoro mivelatra...
Priva P4.8 Fampitaovana tsy mihetsika tsy miovaova dia lasa fitaovana fampiasa amin'ny haino aman-jery . Miaraka amin'ny vokarin'ny efijery marevaka, ny fisian'ny sary haingam-pandeha, ny fahafinaretana mahita maso, ny fiakaran'ny rivotra dia hiakatra ny vokatra rehetra. Ny endri-javatra an'ny...
Shina Fampisehoana Fampandrosoana an'i DJ mpamatsy
Portable DJ Booth Display dia ny fampisehoana tsy mihetsika amin'ny famirapiratra tsy misy tomika, izay afaka mamolavola mozika sy horonan-tsary miaraka. Horonan-tsary DJ Booth Display dia mahatsapa famirapiratana avo, zoro fijerena fahitana lehibe, fanandramana avo ary avo lenta mifanohitra.
Priva LED DJ Booth Screens dia nidina ho an'ireo mpampiasa manana filàna manokana. Amin'izao fotoana izao, dia ampiasaina amin'ny toeram-pialam-boly, haino aman-jery ivelany, efitrano fampirantiana ary tontolo iainana izy ireo.
1. Lanja maivana, famoahana hafanana avo, fampihenana ny herinaratra ambany
2 . Ny fampidirana loharanom-pahalalana marobe toy ny DVD, DVI, VGI
3. Ny toetran'ny toetrandro: ny oram-panala sy ny rivotra, ny hamandoana, ny fiarovana ny tselatra
Booth DJ Boable
Fampirantiana «Diamond DJ Diamond»
Fampisehoana lakandrano vita amin'ny LED